Rasaasa News – Atoobiya oo ka Aamustay Abaarta ka Jirta Gabalka Somalida (Ogaden)
on January 29, 2017 12:23 am
Jijiga, January 29, 2017 – Abaar dad iyo duunyaba dhamaysay ayaa ka jirta Geeska Afrika, gaar ahaana dagaanada Somalida. Laakiin, waxaa la cadeeyey in Atoobiya ay qarinayso abaarta xun ee ka jirta gabalka Somalida (Ogaden) ee ay maamusho.
Biyo la,aan xun ayaa ka jirta dhamaan gabalka Ogaden, waxaan jirin baadka xoolaha. Dhimashada dadka iyo duunyada ayaa daadsan hareeraha jidadka iyo afaafka hore ee tuulooyinka. Waxaa kale oo weheliya abaarto cudurka Kalooraha oo ayna cidina sheegin muddo saddex bilood ah. Macaluusha dadka iyo duunyada ayaan foolxumada la,eegi karin. Ma jiro gurmad dawladeed gabaleed, dawlada dhexe iyo cid hadal haysa midna.
Jabhada ONLF, ayaa khamiistii la soo dhaafay qoraal dheer oo ay kaga hadlayso xaalada abaarta ka soo saartay. ONLF, waxay sheegtay in Atoobiya ay ka qarinayso aduunka abaarta ka jirta gabalka Ogaden, taas oo aan ahayn markii ugu horaysay ee ay dhaqan ka dhigatay miidaan qarinta.
Boggaga Internetka ee wax ka qora gabalka Somalida ayaa hore u sheegay in ay abaaro ba,aini ka jiraan gabalka, iyaga oo ku baraarujiyey dadwaynaha dibada jooga ee gabalka u dhashay. Dawlada degaanka iyo mida dhexe midkoodna ma ogola in gurmad gacaltooyo la gaadhsiiyo gabalka.
Madaxa ismaamulka Soomaalida iyo hogaaminta ugu saraysa Atoobiya oo booqasho micno daro ah dhawar goor magaalada Qabridahare ku tagay, ayaan marna ka hadlin abaarta iyo baaxadeeda.
Warbixin dheer oo uu soo saaray xafiiska qaramada midoobay ku leedahay Addis Ababa, ayaa ku sheegay xaalada gabalka Ogaden mid laga naxo. Stephen O’Brien oo ah madax xafiiska u qaabilsan qaramada midoobay arimaha gargaarka, ayaa sheegay in ay dadku la daalaa dhacayaan siday u noolaan lahaayeen. Stephen O’Brien oo booqasho ku tagay magaalada Wardheer oo xarun u ah gabalka Doolo January 28, 2017, ayaa dayro xun ka muujiyey sida aan looga warhayn abaartan darxumada leh.
Ismaamulka Soomaalida oo soo bandhiga muuqaalo muujinaya in uu wax badan ka qabtay dhibaatooyinkii hore uga jiri jiray degaanka Soomaalida, ayaan xogba ka haynin xaalada abaarta ee xuubsatay dad iyo duunyaba
Abaarta ka jirta dhulka Soomaalida Ogaden, ayaa la mid abaartii ka dhacday gabalka sanadkii 2000, xiligaas oo dawlada Atoobiya lagu eedeeyey in ayna masuul ka noqon karin dadka Soomaalida ah ee ku nool gabalka Ogaden.